Francis Fukuyama: Haasaawe taariikheed | isbeddel
← The Price of Civilization by Jeffrey Sachs – review
A tale of three islands →
Francis Fukuyama: Haasaawe taariikheed
UCBerkelyevents: Barnaamijkiisa ‘Conversations with history’ ayaa Harry Kreisler uu ku sooray Francis Fukuyama si uu ula jeexjeexo wax ugu dhiman buuggiisa cusub ee ‘The Origins of Political Order’. Fukuyama ayaa waxa uu sii yar faqfaqayaa taariikhdiisii kasmo-aqooneed iyo asalkii buuggiisa kale ee ‘The End of History’. Waxa uu tilmaamayaa raadka Samual Huntington ku yeeshay dunida. Haasaawahani waxa uu dul istaagayaa salka nidaamka iyo isahaanta siyaasadeed. Francis waxa uu dul istaagayaa sababta uu u qoray buuggiisa cusub iyo ahmiyadda ay leedahay taariikhda iyo daraasadda isbarbardhigga ku salaysan ee bacrimisay buuggiisani. Sidoo kale, raadka sayniska iyo aragtiyuhu ku leeyihiin isnidaaminta bani-aadanka. Waxa uu isbarbardhigayaa labada farsamo dawladeed ee Hindida iyo Shiinaha isaga oo qiimaynaya qummanaanta farsamo-dawladeedka Shiinaha ee xilligan edegaynta. Dabadeed waxa uu taxliilinayaa ajendayaasha qolada loo yaqaan neo-conservative-ka. Waxa uu ku gunaanadayaa talo uu siinayo ardayda u xadhko xidhan daraasaynta timaaddada. Aragtidii uu ninku ku caan baxay maanta way dhicisowday; Huntington ayaa cirka u eegay. Haddana, illayn waxu waa feker iyo isriixriixe, waa buur in badani ku tiirsan tahay. Ila dhegayso:
Posted by Warfaa on Oktoobar 18, 2011 in Uncategorized
One response to “Francis Fukuyama: Haasaawe taariikheed”
Oktoobar 24, 2011 at 7:12 G